BADMINTON – FIFANINANAM-PIRENENA :: Mpilalao sivy amby fitopolo hiady anaram-boninahitra fito • AoRaha
BADMINTON – FIFANINANAM-PIRENENA Mpilalao sivy amby fitopolo hiady anaram-boninahitra fito
Hotanterahina, amin’ny faran’ny herinandro izao, eny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, efitra kely, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja badminton. Miisa sivy amby fitopolo ireo mpilalao avy amina klioba sivy eo amin’ireo ligim-paritra telo (Analamanga, Vakinankaratra ary Atsinanana).
Mitsinjara amina sokajy efatra (Serie A, B, C ary Vétérans) ireo mpifaninana ireo ka hanomboka amin’ny sabotsy ny fifanintsanana.
Isan’ireo andrasan’ny rehetra amin’ity fifaninanam-pirenena ity ny fiarovan’i Aina Vonjinirina Marc Alberto avy ao amin’ny klioba Sangasy sy SoaniainaTombotsoako Razanamaly avy ao amin’ny SC Itaosy ny anaram-boninahitra eny am-pelantanan’izy ireo.
Hiady laharana amin’i Aina amin’izany, eo amin’ny sokajy lehilahy i Hery Zo Rakotoharinivo avy any Antsirabe (ABC).
Tsy isan’ireo nandray anjara ny lehilahy tamin’ny fifaninanam-pirenena 2017 ary niverina indray tamin’ity taona ity. Izy no niambozona ny medaly volamena tamin’ny taona 2016 saingy niondrana kely tany Japon tamin’ny taon-dasa. Farany teo dia azony ny amboara “Masters”, nokarakarain’ny Federasiona.